kaaftoomi The sii kordheysa ee duulaya on diyaaradaha ganacsiga waxaa wadista dad badan oo dheeraad ah si ay axdiga diyaaradiisa khaaska ah. Khadadka caadooyinka Long, jeegaga ammaanka TSA, garoomada diyaaradaha dadku ku, kaliya qaar ka mid ah aan ku haboonayn ee duulaya on diyaaradaha ganacsiga. Dadka si caadi ah u soo duuli fasalka koowaad ama fasalka ganacsi ayaa hadda sii kordheysa eegaya ee dhaqaalaha ee axdiga diyaaradiisa khaaska ah. Si kastaba ha ahaatee, duwan la diyaaradaha ganacsiga, ma fududahay in la helo kharashka dawladdu jet ah. Sidaas halkan waxaan ka jawaabaan su'aasha ah: imisa qiimuhu in charter jet gaar ah?
Adeegga kale waxaan la siiyo
Kharashka dawladdu jet ah la siiyo ee doolar halkii saac oo duulaya. Sidii la filayay, kharashka kala duwan lagu daydo kala duwan ee diyaaradaha. diyaaradaha qaarkood waa raaxo, halka kuwa kale aan ahayn in raaxo. diyaaradaha qaarkood waxay leeyihiin meel in ka badan darsin rakaab ah, halka kuwa yaryar sida yar sida afar kursi rakaabka oo kaliya.
Mid ka mid ah diyaaradaha charter yar ee suuqa waa Tigidka Cessna ku Mustang, oo fariisan kartaa oo ku saabsan 4-5 rakaab ah. Waxa kale oo ay dhacdo in ay diyaarada ugu jaban in charter: aad awoodo charter a Cessna Tigidka Mustang for ah oo ku saabsan $1700 saacadiiba ah oo duulaya.
Waxbaa ka badan Mustang tigidka ganaaxa waa Learjet ah 60, oo fariisan karaa ilaa 8 rakaab ah. Made by Bombardier Aerospace ee Wichita, Kansas waxa aad ku kici lahaa saabsan $3400 halkii saac oo duulaya in charter Learjet ah 60.
Dhamaadka sare waa diyaarad sida Gulfstream 550, taas oo kharash ah oo ku saabsan $8600 saacaddii waqti duulaya. Waxay kaa caawinaysaa in xoogaa in ay fariisan karaa oo ku saabsan 14-19 rakaab ah.
Jet Private Charter Jackson, MS Diyaaradaha Diyaarad Company kirada Me Dhow